Iimfuno zokuHlala kweNyaka yoQeqesho lweKholeji
Kubafundi nabazali Ukuphila kwi-Campus
Izidingo zokuhlala kwiikholeji
Kwiikholeji ezininzi nakwiiyunivesithi, kuya kufuneka uhlale kwiiholo zokuhlala unyaka wokuqala okanye ezimbini kwiikholeji. Izikolo ezimbalwa zifuna ukuhlala kwikampus iminyaka emithathu.
Kutheni Kufuneka Uhlale KwiCampus Unyaka Wokuqala weKholeji
Abafundi banako ukuhlala ekholeji xa beva ngathi bangabo. Lo mqondo wokuba ngumntu unempembelelo ngqo kwizinga le-kholeji yokugcinwa kunye nezinga lokuphumelela. Xa abafundi abatsha behlala kwi-campus, abanako amathuba okubandakanyeka kwiiklabhu zeenkampu kunye nemisebenzi, kwaye baya kuba nexesha elinzima ukwenza abahlobo phakathi kwabafundi .
Xa umfundi ehlala kwikampus, ikholeji inexesha elilula lokuncedisa ukuba loo mfundi uhlangabezane neengxaki kwi-front or social front. Abacebisi bemihlali (ii-RA) kunye nabaPhathi bemihlali (RDs) baqeqeshwe ukuba bangenelele kwaye bancedise xa abafundi bekhuselekile, kwaye banokukunceda abafundi ukuba babone abantu abafanelekileyo kunye nezibonelelo kwi-campus.
Imfundo yekholeji yimalunga ngaphezu kokufunda kunye nokufumana idigri. Ubomi bokuhlalisa ubomi bufundisa ezininzi izakhono zobomi ezibalulekileyo: ukuxazulula iingxabano kunye nomntu ohlala naye , abavoti, kunye / okanye abafundi kwiholo lakho; ukufunda ukuhlala nabantu abangahle bahluke kuwe; ukwakha indawo yokuhlala kunye nokufunda; kwaye nangokunjalo.
Kwizikolo ezininzi, iifolo zokuhlala kwiikampu zisondele kakhulu kwiindawo ezibalulekileyo (ilayibrari, i-gym, iziko lempilo, njl.) Kuneendawo zokuhlala ngaphandle kweenkampu.
Iikholeji zinako ukukwazi ukujonga ukuziphatha okungekho mthethweni kwi-campus, kodwa ngaphakathi kwimisebenzi yeeholo zokuhlala ezifana nokusela kwamanzi kunye nokusetyenziswa kweziyobisi ezingekho mthethweni kungafunyanwa kwaye kuphendulwe ngokulula.
Xa ungumfundi omtsha, kunokufumana inzuzo enkulu yokuhlala kwisakhiwo esifanayo kunye nabafundi abaphezulu kunye / okanye ii-RA abazi i-campus kunye nokulindela kwizifundo. Uza kubafumana abacebisi abaninzi kwiholo yokuhlala kwikampu kunokuhlala kwindlu yokuhlala.
Kanye kunye nabacebisi abaphezulu, uya kuba neqela leontanga eziza kubandakanya abafundi bathatha ezinye iiklasi ezifana nawe. Ukuhlala kwi-campus kukunika ukulungelelela ukufikelela kumaqela okufunda, kwaye oontanga banokukuncedisa ukuba unyanzelekile ukuba ungaphuthelwa kwiklasi okanye ukuba ufumana izinto ezivela kwintetho edidekayo.
Ngaphandle kwezibonelelo ezicacileyo zokuhlala kwi-campus, iikholeji zinesizathu esithile sokuba kugcinwe abafundi kwi-campus enokuba yinto encinci. Ngokukodwa, iikholeji zenzile yonke imali yazo kwiidiski zemfundo. Ngenxa yesininzi sezikolo, imali engenayo ebonakalayo iphuma kwiindleko kunye neebhodi. Ukuba ama-dorm ahlala engenanto kwaye abafundi abaneleyo basayinwe kwizicwangciso zokutya, iikholejini iya kuba nexesha elinzima lokulinganisa uhlahlo lwabiwo-mali. Ukuba amazwe aqhubela phambili kunye nezicwangciso zokufunda zamahhala ezifundisiweyo kwiiyunivesithi zikarhulumente (njenge- New York Excelsior Programme ), yonke ingeniso iya kuvela kwigumbi, ibhodi kunye nemirhumo ehambelana nayo.
Gcina ukhumbule ukuba iikholeji ezimbalwa zineenkqubela zokuhlala ezibekwe kwilitye, kwaye iimeko eziqhelekileyo zenziwa rhoqo. Ukuba intsapho yakho ihlala kufuphi nekholejini, unokufumana imvume yokuhlala ekhaya. Ukwenza okunjalo kubonakala kunenzuzo ebonakalayo eninzi, kodwa ungaphumeleli indawo yeengqungquthela ezingaphezulu kunye nokuba ungayilahla ngokukhetha ukuhamba. Kwakhona, ezinye iikholeji ezineemfuno ezimbini zokuhlala zonyaka zivumela abafundi abanamandla ukuba bacele ukuba bahlale kwikampus. Ukuba uqinisekisile ukuba ukhule ngokwaneleyo, unokukwazi ukuhamba kwikampus kungekudala kunokuba uninzi lwabafundi ofunda nabo.
Ekugqibeleni, zonke iikholeji zineemfuno zokuhlala eziphuhliselwe imeko ekhethekileyo yesikolo. Uza kufumana ukuba ezinye izikolo zasezidolophini kunye nakwiiyunivesithi eziye zandiswa ngokukhawuleza nje zinezithuba zokuhlala ezikwindawo yokuphatha bonke abafundi. Ezi zikolo kaninzi azikwazi ukuqinisekisile izindlu kwaye zinokuvuyisa ukuba uhlale kwikampus.
Ukuba nguMcebisi ngezeMhlali (RA)
Ngaba Ufanele Ube ngumNcedisi weKholeji weKholeji (RA)?
Iikholeji zeeKholeji ozisebenzisayo ngakumbi
Into enokuyenza Ukuba Ulahlekelwa i-Pet yakho kwiKholeji
Iindleko zeDorm eziqhelekileyo zabaFundi beKholeji
Yintoni enokuyilindela kwiKholeji yokuhamba ngoMhla
I-10 e-Irish i-Golfers ye-All Time Time
Isicwangciso seSifundo seHalloween
Ukubala nokuqonda iiRhafu eziNyathelo
Umthi we-Slash Pine, i-Southern Yellow Pine
Ookumkani baseLwandle lwaMandulo lwaMandulo
Ubani uKorneliyo eBhayibhileni?